Riots have taken heavy toll on Chile tourism | Travel Destination Update
Ikhaya » Iindawo ekuyiwa kuzo » Uqhushululu luye lwathathisa kakubi ukhenketho lwaseChile
Uqhushululu luye lwathathisa kakubi ukhenketho lwaseChile
Disemba 17, 2019
Ngokophando lwamva nje ngomzi mveliso wokuhamba, uqhushululu lwamva nje Chile bathabathe ukhenketho olukhulu elizweni.
Uqhanqalazo oluchasene nokunyuka kweendleko zokuphila, ukungalingani kwezentlalo kunye nokunyuka kwentlawulo kwimetro yasesantiago kukhule ukusuka ekuqaleni kwabo nge-7th ka-Okthobha ukuya kwi-crescendo emangalisayo nge-18th ka-Okthobha xa amaqela acwangcisiweyo onakele kakhulu kwizikhululo ze-80 metro, ngesiphumo sokuba i-metro ivaliwe phantsi kunye nexesha elibekiweyo lokuba kubuyelwe ekhaya kwi-Greater Santiago.
Ukusukela ngoko, uqhanqalazo luye lwasasazeka kwezinye iidolophu kwaye nge-25 ka-Okthobha, ngaphezulu kwesigidi se-Chile sangena ezitalatweni zifuna ukurhoxa kuka-Mongameli. Ukubhukishwa kweenqwelomoya nge-2019 eChile ngaphambi koqhanqalazo ukuya kuthi ga kwi-13th ka-Okthobha bebe-5.2% benyuka ngexesha elilinganayo kwi-2018 kwaye kwiveki ye-14th-20 ka-Okthobha bebephezulu nge-9.4%; Nangona kunjalo, kwiveki elandelayo, bawile, i-46.1% yehlile. Lo mkhwa uqhubekile, kunye nokubhukisha malunga neepesenti ezingama-55 ezantsi nganye kwezi veki zilandelayo. Kwezi veki zimbini zidlulileyo, ebiphawulwe sisibhengezo sesicwangciso sokuvuselela uqoqosho esenziwe ngu-Mongameli kodwa saqhubeka nokwenza uqhushululu ngabaqhankqalazi, ukwehla kokubhukisha kunciphile kancinci. Ngexesha leveki ye-5.5th-Nov-25st Dec, bebe-1% behlile kwaye kwiveki elandelayo, ngama-36.8% ezantsi.
Phambi koqhushululu, iChile yayisenza ngcono kakhulu ekutsaleni abakhenkethi kunenani lokukhula kweepesenti ezi-5.2 kwikota ezintathu zokuqala zonyaka ezibonisa. Kungenxa yokuba kuye kwakho ukwehla okumandla kwiindwendwe ezivela kwenye yezona ntengiso zibalulekileyo, iArgentina, ngenxa yokuwa kwePeso yaseArgentina.
Ukusukela ekuqaleni kuka-2018, ixabiso le-peso yase-Argentina lingaphezulu kwesiqingatha sexabiso xa lithelekiswa nepeso yase-Chile, neziphumo zokuba iindwendwe zifike nge-31.1% ukusuka ku-Januwari 2018 ukuya ku-Novemba ngo-2019. Ngokuchasene nonyaka ophelileyo, ukufika kweChile ukusuka eArgentina kwehle kwaba ngaphantsi kwama-50% okokuqala ngoSeptemba 2018 kwaye loo nto yaqhubeka de kwango-Matshi 2019, ngelo xesha, isantya sokwehla saqala ukucotha, nangona ukwehla kwaqhubeka.
Phambi koqhushululu, iingcali ziqikelele ukuba ukwehla okuqhubekayo kokubhukisha eArgentina bekuya kuba kuzinzile ngasekupheleni kwalo nyaka; Nangona kunjalo, imeko ngoku ikhangeleka ingenathemba ngenxa yemeko yezopolitiko yakutshanje kunye nokwehla okukhulu kokufika ngoNovemba.